Pabrikan'ny fako - Mpanamboatra fako any Sina, mpamatsy
Ny fako manary fako dia mety ho fitoeram-pako. Ireo kapoaka ireo dia mety amin'ny hetsika indostrialy sy lehibe, amin'ny ankapobeny ity faritra ity dia hanana fako be, fako be. Any amin'ny faritra be olona toy ny sekoly na ny kianja dia mila manangona taratasy, tavoahangy, na kapoaka marobe ihany koa, fidi-pako manaparitaka no tena safidiana.
Manasongadina endrika tsy dia misy mombamomba azy, ny wastebasket / fitoeram-pako mahitsizoro dia tsara ho an'ny birao sy hampiasaina eo alohan'ny trano any amin'ny trano fisakafoanana. Ny endriny manintona an'ity fitoeram-pako ity dia miaraka amin'ny fandokoana sy ny habe maro samihafa. Fanampiny tsara ho an'ny fampiantranoana / mpampiantrano anao izany, na ampiasao ao ambadiky ny kaontera ao amin'ny magazay fivarotana kely mba hahafahan'ny mpiasanao manary haingana ny sombin-taratasy tsy ilaina, na koa amin'ny deskside ampiasaina.
23L / 42L vovoka plastika toradroa misy fonony-B031 B032
Ny kaontenera deskside dia mahomby amin'ny habakabaka, ara-toekarena ary vahaolana mora sy mahomby amin'ny deskside sy fanodinana.
Ity dia fitoeram-pako tsy misy fifandraisana tena tsara miaraka amin'ny fonony, afaka manarona ireo fako maloto izy, ary ny swing dia hanakana anao tsy hikasika ny fitoeram-pako.
58L Fanangonana fonosana fanangonana Bin-B016D / B016E
Ny plastika rehetra-plastika dia tsy hikorontana, tsy harafesina na mihidy. Manampy tanjaka ny rims mihorona ary mora diovina.
58L Fanangonana taratasy fako 58-B-016A / B-016B / B-016C